Rosia: Mpitoraka blaogy Tatarstana iray voasazy 2 taona latsaka any amina Tobim-pigadràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2009 7:34 GMT
Irek Murtazin, sary avy amin'i Sergey Varshavchik
Tamin'ny 26 Novambra, ny fitsaràna ao amin'ny distrikan'ny Kirov any Kazan, izay renivohitry ny Repobilikan'ny Tartastan, dia nanameloka an'i Irek Murtazin, mpanao gazety sady mpitoraka blaogy 45 taona, noho ny fanaparitahana vaovao tsy marina ary fisarihana saim-bahoaka ho amin'ny fankahalàna, hoy ny Gazeta.ru [RUS] mitatitra . Nanasazy an'i Murtazin herintaona sy sivy volana an-tranomaizina any amina tobin-gadra (karazana fanagadràna ipetrahan'ireo gadra tsy any am-ponja fa any amina toby manokana ho an'ireo gadra).
Tokony ho herintaona lasa izay, tamin'ny Desambra 2008, Murtazin – lehiben'ny fanaovan-gazety Shaimiev fahiny ary mpanohitra sady mpitoraka blaogy ankehitriny, mitondra ny solon'anarana LiveJournal irek-murtazin [RUS] – dia voapanga ho nanaparitaka vaovao tsy marina momba an'i Mintimir Shaimiev, Filoham-pirenen'ny Tatarstan. Tamin'ny 12 Septambra 2008, namoaka lahatsoratra i Murtazin nanamarihany fosafosa kely momba ny nahafatesan'i Shaimiev. Nanoratra [RUS] izy:
Nisy ampaham-baovao ratsy dia ratsy tonga…
…Maty tampoka Mintimir Sharipovich Shaimiev rehefa niaina 72 taona, nandritra ny fialany sasatra tany Turkey (Kemer).
Raha tsorina – tsy mampino ahy izany. Na raha faritana tsara – tsy te-hino izany aho. Satria raha marina izany, dia ho fikorontanana tahaka ny inona, ady tahaka ny inona ny fiadiana ho eo amin'ny seza tsy misy mpitoetra, ka ho vakivaky etsy sy eroa ny volon'ireo tantsaha. Ary noho ireny fanombatombanana ireny no hiezahan'ireo akaiky indrindra an'i Shaimiev hanafina izany vaovao izany. Mba hahazoana fotoana hivondronana (ny handaozana ny firenena mihitsy aza). Amiko, izany no antony tsy hipoiran'ny vaovao ofisialy raha tsy afaka herinandro.
Nolavina tamin'iny andro iny ihany ny tsaho momba ny fahafatesan'i Shaimiev, nefa nidina ambany dia ambany ny “cours des actions”-na orinasa mpamatsy solika iray izay lazaina fa an'ireo mpisolotena ilay antsoina hoe “fiombonana [clan] Shaimiev”, hoy Lenta.ru [RUS]. Tamin'ny Desambra 2008 i Mourtazin dia voapanga ampahibemaso noho ny fanaparitahana vaovao tsy marina sy fidinkidirana amin'ny fiainan'i Shaimev manokana (tsara ny manamarika fa nofoanan'ny fitsaràna io fanamelohana an'i Murtazin io, ary io ihany).
Efa saika naharitra taona iray ny fitsaràna, ary nanampy fanamelohana vaovao foana ny mpitsara, manameloka an'i Murtazin ho manaparitaka vaovao tsy marina, tsy ao amin'ny blaoginy ihany, fa koa any amin'ilay bokiny “Mintimir Shaimiev: Ny Filoha farany tao Tatarstan. Fizarana 1 [Mintimir Shaimiev: The Last President of Tatarstan. Part 1]″ , ary any amin'ny famoaham-baovaony “Ireo Vaovaontsika Kazan [Our Kazan News]” (”Наши казанские вести,” izay nosoritan'i [RUS] Murtazin tamin'ny Oktobra 2008 ho “Famintinana ara-printy” ny blaoginy ao amin'ny LiveJournal).
Niteny Murtazin fa tsy manaiky ny valin'ny fitsaràna izy ary hampakatra fitsarana ambony amin'izany.
Azo jerena ato ireo sary tamin'ny fitsaràna.
Tantaram-piainan'Irek Murtazin (araka ny Anticompromat.org)
Teraka tamin'ny taona 1964 tany amin'ny zaratanin'i Bogatye Saby, any Tatarstan
1981-1990 – nanao raharaha miaramila tao amin'ny tafika Sovietika, ary tao amin'ny GRU (Sampam-pitsikilovan'ny tafika)
1985 – nahazo diplaoma tao amin'ny Sekoly ambonin'i Tank any Kazan
1990-1991 – mpanampy ilay solombavambahoaka Vladimir Lopatin
1995 – nahazo diplaoma tao amin'ny Akademiam-panjakàna momban'ny Lalàna – Maoskoa
1991-1995 – lehiben'ireo mpanatontosa ny gazety “Rosiana Avaratra [Russian North]” sy “Gubernskie Vesti”
1993-1995 – lehiben'ireo mpanatontosa tao amin'ny TV-7, tobim-pahitalavitra any Vologda
1995-1999 – lehiben'ny birao tao amin'ny VGTRK (orinasam-pahitalavitra lehibe indrindran'ny fanjakàna) any Kazan
1999-2002 – lehiben'ny sampana mpampita vaovaon'ny Filoham-pirenen'i Tatarstan
2002-2003 – lehiben'ny tobim-pahitalavitra “Tatarstan”
2003-2004 – lehiben'ny biraon'ny VGTRK tany Minsk, Belarus
2006-2007 – mpikambana tao amin'ny biraom-paritry ny antoko Rosia marina [A Just Russia]any Tatarstan
2008-2009 -mpanonta ary lehiben'ireo mpanatontosa ilay famoaham-baovao “Ireo Vaovaontsika Kazan” (natonta tany ivelan'i Tatarstan, tany Cheboksary, Repoblikan'i Chuvashia)